Qiimaha Baradhada iyo Karootada ayaa Fall - Nidaamka Baradhada
Sida laga soo xigtay East-Fruit, usbuucii hore, qiimaha baradhada ayaa ku dhowaaday meel kasta marka laga reebo Moldova, halka xaaladda karooto karooto ay ahayd mid deggan. Sidaa daraadeed, alaabooyinkani si aad ah ayey hoos ugu dhacday Georgia iyo Ukraine, laakiin sicirka ayuu kor ugu kacay Belarus. Wadamada kale, si dhib yar oo karooto ah dib looma cusboonaysiin.
Sare u kaca sicirka dukaamada ayaa la joojinayaa iyadoo kharash laga helayo alaab-qeybiyeyaasha
Gobolka Duma ee Ruushka wuxuu tixgelin doonaa biil loogu talagalay in lagu yareeyo saamiga alaabada been abuurka ah ee suuqa sunta cayayaanka
2020 waxay ahayd sanad ku wanaagsan wax soo saarka dalagyada. Natiijooyinka xilligii beeraha
Shirka "Cayayaanka-2020": natiijooyinka
Inta badan firfircoon intii lagu jiray muddada warbixinta, baradhada ayaa ku jabtay Ukraine. Halkan, soo-saareyaashu waxay ku dhowaad waddanka oo dhan ka bilaabeen bilawga ololaha goynta, iyo qiimaha toddobaadlaha ah wuxuu ku dhacay seddexaad illaa $ 0,26-0,29 / kg.
Xaalad la mid ah ayaa sidoo kale lagu arkay Belarus, halkaasoo qiimaha barandhada uu ku dhacay $ 0,31-0,35 / kg. Baradhadu barashadu waxay hoos ugu dhacday Russia iyo suuqa Ruushka dhammaadka usbuuca, qiime aad u ballaaran oo ah $ 0,24-0,37 / kg ayaa la aasaasay.
Alaabada ugu jaban ayaa wali lagu bixin jiray Poland. Halkan, beeraleyda maxalliga ah waxay diyaar u ahaayeen inay horay u iibiyaan baradhada $ 0,10-0,15 / kg.
Georgia iyo wadamada Aasiyada Dhexe Ayaan ka duwanayn, baradhada dalagyada 2020 ee suuqyadaas ayaa iyaguna hoos u dhacay sicirka. Dhamaadka usbuuca, Georgia waxay ka iibsan kartaa baradhada $ 0,16-0,23 / kg, qiimaha Uzbekistanna wuxuu hoos ugu dhacay $ 0,25-0,29 / kg. Heerka ugu hooseeya ee firfircoon ee qiimaha dhimista ayaa laga arkay Tajikistan, halkaas oo baradhoku ku dhacay kaliya uun senti halkii kilo halkii celcelis ahaan $ 0,35 / kg.
Dhanka kale, gudaha Moldova xaaladdu way xasilloonayd, baradhada, sida usbuucii hore, waxaa lagu bixiyey $ 0,29-0,35 / kg.
Suuqa karooto wuu ka yarayn marka loo eego baradhada, laakiin halkan, waddamada badankood, qiimaha ayaa dib loo eegay.
Sidaa daraadeed, gudaha Ukraine, karootada waxay hoos ugu dhacday sedex meelood meel ahaan, dhamaadka dhamaadka usbuucii suuqyada Yukreeniyaan waxay ka codsadeen $ 0,29-0,37 / kg alaabooyinkan. Qiimaha qiimayaashu xitaa si firfircoon ayuu ugu dhacay Georgia, xaaladaha qaarkood wuxuu ku dhowaad labalaabsaday $ 0,20-0,33 / kg.
Belarus, taa beddelkeeda, karootada ayaa qiime ahaan kor ugu kacay, iyagoo qiimahoodu kor u kacay 14-18% illaa $ 0,62-0,74 / kg.
Dhanka kale, gudaha Russia, qiimayaasha ugu badan ee karootada tayo sare leh ayaa wali gaadhay $ 0,43 / kg, halka alaabada tayadoodu hooseyso ay hoos u dhacday qiimo ahaan waxaana lagasoo bandhigay $ 0,28 / kg. Dalka Moldova iyo Poland, suuqa karootoku wuxuu ahaa mid deggan. Markii hore, karootada waxaa lagu soo bandhigay $ 0,46-0,52 / kg, halka Poland, karootada dibedda laga keeno ee dalag cusub laga iibiyay $ 0,51-0,58 / kg.
Wadamada Bartamaha Aasiya, qiimayaasha karooto ayaa waxyar kor u kacay $ 0,15-0,19 / kg gudaha Tajikistan iyo $ 0,23-0,25 / kg gudaha Uzbekistan.
Tags: baradhada horesuuqa karootoqiimaha baradhada
Baradhada Bryansk waxaa lagu iibiyaa 200 rubles halkii kiilogaraam
Ukraine waxay qorsheyneysaa inay hesho miro baradho wanaagsan